Talata, Jona 13, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Niantso ahy ny zanako vavy androany rehefa nahazo fonosana tamin'ny mailaka avy tamin'i Jones Soda. Mahatalanjona ity orinasa ity! Ho fisaorana ny asa nataoko tamin'ny fanao mahazatra My Jones Music Hira mpilalao MP3, nandefa fonosana fisaorana i Jones. Oay! Nisy sweatshirt, stiker bumper sasany, sticker hafa, keychain, balsama molotra ary pin !!! Tsy afaka milaza betsaka momba ity orinasa ity aho. Ny mivoaka amin'ny lalan'izy ireo toy izany dia tena milaza zavatra betsaka. Misotroa Jones Soda !!!
Ka nieritreritra aho fa tena nahatonga ny androko io… saingy vao fanombohana io.
Nandehandeha nankany amin'ny fiarako aho, nisy lehilahy iray tafintohina taminao, izay nandeha ra tamin'ny ilany ankavanany nidina avy tao anaty kilaoty fohy. Nilaza tamiko izy fa voatsatoka antsy. Napetrako teo amin'ny sisin-dalana izy ary nakariko ny lobany. Nandatsaka rà tamin'ny ratra antsy 2 teo amin'ny sisiny izy. Tsy nanana na inona na inona hitana azy aho, ka notsindriako tamin'ny tanana iray ilay ratra ary nantsoiko ny polisy niaraka tamin'ilay iray hafa. Nanaintaina kely izy ary very ra kely. Tonga ny mpamonjy voina ary nentina haingana tany amin'ny hopitaly. Nihazona ny laniny nandritra ny 20 minitra aho ary nijanona ny fandehanan'ny ra. Nisy nanome ahy lamba madio avy any amin'ny trano fisakafoanana.
Nilaza ny polisy fa nisy vahana 50/50 hisintahana. Dale no anaran'io lehilahy io ary 52 taona izy. Tamin'ny fotoana nanadiovako dia heveriko fa nanana vavolombelona 2 ny polisy nahita ny fanindronana ary hitan'izy ireo ilay antsy. Tsy haiko ny mamantatra raha toa ka nahavita an'io i Dale. Mivavaha ho an'i Dale.
Ka… andro inona! Tena feno fankasitrahana aho fa teo amin'ny toerana mety tamin'ny fotoana mety. Lehilahy 1 hafa ihany no nijanona niaraka tamiko raha nihazona ny sisin'i Dale sy mpandroso sakafo iray nanome ahy ilay lamba madio aho. Somary manelingelina kely amin'ny zoro be olona toy izany any Indianapolis. Mandeha an'io sidewalk io isan'andro aho mankany sy avy amin'ny fiarako.
Mivavaha ho an'i Dale!
Fanavaozana: Ity ny Tatitry ny polisy.